Yan Aung: စာအုပ်ဒီဇိုင်းပထမအဆင့်
စာအုပ်ဒီဇိုင်းကို ကိုညီလင်းဆက် အစမ်းဆွဲပြထားတာလေးတွေပါ. မြန်မာဘလော့ဂါဖိုရမ်မှာ တင်ထားပါတယ်.
ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာ အရင်တင်ပြီး လာဖတ်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒလေးကို သိချင်လို့ပါ. ဘယ်ပုံလေးကို ပိုပြီးနှစ်သက်ပါသလဲ.
I like sample 2. I am www.hteinkmin.blogspot.com
i like sample 2. it looks warm n friendly. sample looks cold, formal and unfriendly. sample 1 is normal. by the way, is it ok to include blogger logo?
sample3ကိုပိုကြိုက်တယ် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်၇ှိတယ်
ကိုရန်ရေ.. ကျွန်တော်လည်း sample3ကိုပိုကြိုက်တယ်ဗျို့
sample 1&2 မှာ ဘာတွေ ရှုပ်နေမှန်းမသိဘူး ဒါပေသိ လှိုင်းတွေများဖြစ်မလားမသိဘူး
sample3ကတော့ လေးထောင့် ဆုံမှတ်တွေများဖြစ်မလားလို့ ဟဲဟဲ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် sample3ကိုတော့ ပိုကြိုက်ပါတယ်
Sample2ကို ပိုသဘောကျတယ် (color ကြောင့်လဲပါတယ်)… နော်တို့တွေရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားမှု အတွေးလှိုင်းလေးတွေကလည်း ပုံထဲကလိုပဲ လှုပ်ရှားလွန့်လူးလာပြီး သူတကာရဲ့ ရင်ထဲကို ရိုက်ခတ်စေမယ်ဆိုတဲ့ သဘောကိုပြတယ် (ညလေးအတွေး) ပြီးတော့ ခေါင်းစဉ် “အနာဂတ်လှိုင်းတို့၏ဆုံမှတ်များ” ဆိုတာနဲ့လဲ ကိုက်ညီတယ်....
ကျွန်တော် လဲ မဲပေးရမယ်ဆိုရင် sample 1 ကို ကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ပုံတွေထဲမှာ ပြောရရင် sample 1 က နောက်ခံ အရောင်က ဖျော့ပေါ်မှာ blogger logo အရောင်တောက် တင်ထားတဲ့အတွက်လှပါတယ် နောက် က လှိုင်းပုံ ရှိပ်တွေ ကလည်း သဘောကျစရာပါ စာအုပ်ဆိုင်က စင်မှာ တင်ထားရင်တောင် မဖတ်ရင်မနေနိုင်ဖြစ်လောက်ပါတယ် sample3လည်း 1 လိုပဲ နောက်ခံနဲ့ logo နဲ့ လိုက်ဖတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်2ကတော့ နောက်ခံက အရောင်က လည်းတောက် နေတော့ logo သိပ်မပေါ်လှဘူးလို့ ထင်မိပါတယ် ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်လည်း sample3ကိုပိုကြိုက်တယ်ဗျို့
Sample 1 n2are nice.
2 is more active n can take interest...
I prefer 1 coz it is calm...
Thz for sharing it...
စင်ပယ် ၁ နဲ့ ၂ ကို ကြိုက်ပါတယ်။ ၁ကိုရွေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်
ဘလောက်လိုဂိုလေးကို ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ပြောင်းပြီး ထည့်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ အရောင်ကောပေါ့...
ကိုရန်ရေ - Sample 1 ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲဗျ။ ကျွန်တော် တစ်ဦးတည်း ဆန္ဒနဲ့ ဆိုရင်တော့ Blogspot Logo ကို သိပ်အကြီးကြီး မထည့်စေချင်ဘူး။ ဖိုရမ်မှာ နည်းနည်းတော့ ဆွေးနွေးကြည့်ပါဦးမယ်။ EOT အတွက် အထူးကျေးဇူးပါ။
I like sample2but I think we shouldn't use the Blogger logo.
ပုံစံ သုံးကို နှစ်သက်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ် လိုဂိုလေးပဲ ပြောစရာရှိပါတယ်။ ကျန်တာအကုန်ကောင်းပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ တည်ငြိမ်ပါတယ်။
စာအုပ်နာမည်အတွက် အားတက်သရော ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေရောင်းရင်းများကို ကျေးဇူးအမျာြး့ကီးတင်ပါတယ်. မြန်မာဘလော့ဂါဖိုရမ်မှာ ဒီဆွေးနွေးချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပြီး အကြံပြုထားပါတယ် ခင်ဗျာ...
အကြောင်းထူးရင် ဒီပို့စ်လေးကို update ထပ်လုပ်ပေးပါဦးမယ်...
I also like sample 2.